Mpandeha sarimihetsika haingam-pandeha haingam-pandeha - Mpamatsy sarimihetsika haingam-pandeha haingam-pandeha any China, Factory –Jwell
Filaharana ho an'ny sarimihetsika haingam-pandeha haingam-pandeha
Ny sarimihetsika vita amin'ny haingam-pandeha haingam-pandeha Jwell Company dia mihaona amin'ny sisiny matevina miaraka amin'ny rafitra fanitsiana tanana mba hanamorana ny fiasa famadihana ny sakany sy ny fanitsiana an-tserasera. Ny rafitra fanitsiana sisin-tany tsy miankina dia afaka mampihena ny olana matevina. Amin'izany dia mampihena ny fako amin'ny polymer sy ny substrate. Ity dia maty mety amin'ny famokarana ny sakan'ny ambanin'ny 5000mm, ny hatevin'ny 0.012-0.12mm an'ny vokatra PP, PE, PET, EVA.
Manitsy haingana ny sakany, ny hetsika ankapobeny amin'ny fivorian'ny fanidiana mba hamenoana ny sakany
fanitsiana. Raha vantany vao vita ny vokatra hahazoana ny takiana hatevin'ny sisiny tadiavina dia ahitsy ny fipetrahana ny rafitra fanidiana rehefa miverina averimberina ny sakany dia tsy manitsy intsony ny rafitra fanidiana.
Fanadiovana haingana sy fikojakojana. Ny mpandraharaha dia afaka manokatra haingana ny rafitra fanitsiana ny sakan'ny sisiny matevina, ampidiro ny scraper varahina hanesorana polymer carbonized
Rafitra famehezana tena mahomby: Mampiasa rafitra fanamafisam-peo tsy manam-paharoa mba hiantohana ny fotoana maharitra
tsy mamoaka ny famokarana plastika.
Fiarovana: Manangana fanidiana tsy feno ny fanamafisam-peo vita amin'ny vy, ny fahombiazany ary ny angovo.
JWZ-BMQC05D / 12D / 20D Masinina mihetsika tsofina miisa roa